Taliye Gorod: “Lataliye Koor, awood uma lihid in aad soo faragelisid howlaha XDS” – Radio Daljir
Taliye Gorod: “Lataliye Koor, awood uma lihid in aad soo faragelisid howlaha XDS”
Febraayo 20, 2018 2:01 b 0
Waraaqo ay labada masuul ee DFS isdhaafsadeen ayaa muujinaya khilaaf xoogan oo u dhexeeya Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, Cabdiwali Jaamac Gorod iyo Lataliyaha dhanka amniga ee Madaxweyne Farmaajo, Mudane Cabdisaciid Muuse Cali Koor.
Sida ku cad warqadda hoose ee Lataliye Koor, khilaafka ayaa salka ku haya warqad uu Lataliyuhu 16kii Janaayo u qorey Taliyaha Ciidanka uuna ku farayo 3 arrimood oo muhiim ah, oo tan koowaad tahay in saadka, rasaasta iyo hubka dowladda aan amar la’aan lagu qaybin karin; tan labaadna tahay in sidoo kale saadka, rasaasta iyo hubka dowladda iyo macluumaadkooda aan lala qaybsan karin beesha caalamka ayada oo aan marka hore la soo wargelin Xafiiska Amniga Qaranka iyo Wasaaradda Gaashaandhigga.
HALKAN RIIX OO AKHRI Warqadda Lataliye Koor
Taliyaha Ciidanka XDS, Taliye Gorod, oo u jawaabaya Lataliye Koor ayaa ku jawaabay in “Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed uu toos u hoos yimaado Xafiisk Taliyaha Ciidanka XDS, cid kalena aan toos ula xiriiri karin” ciidamada iyo ammuuraha la xiriira ciidanka XDS. Taliye Gorod oo qoraalkiisa sii wata ayaa Lataliye Koor ugu jawaabay, “awood uma lihid in aad soo faragelisid, waxayna gaar u tahay arrimahaas Taliyaha Ciidanka XDS.”
HALKAN RIIX OO AKHRI Warqadda Taliye Gorod – Bogga 1aad
HALKAN RIIX OO AKHRI Warqadda Taliye Gorod – Bogga 2aad
Radio Daljir oo la xiriiray masuuliyiin Wasaaradda Gaanshaandhiga waa ay ka gaabsadeen in ay ka warbixiyaan salka khilaafka, ayaga oo ku jawaabay in hawshaas ay hadda Madaxtooyadu ku hawlantahay.
Khilaafka labada masuul ayaa soo baxay ayada oo maalmaahaan ay soo ifbaxayaan khilaaf kale oo baahsan oo ka dhexaloosan Madaxweyne Farmaajo iyo RW Kheyre. Khilaafka Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha ayaa la soo warinayaa in uu la xiriiro khilaaf ka dhashay ruqsaddii Duqii hore ee Muqdishu, siina labajibbaarmay markii la magacaabay Eng. Yariisoow, Duqa cusub ee Degmada Muqdisho. Khilaafka masuuliyiinta sare ee dowladdu kuma eka maamulka Muqdisho iyo masuuliyiintiisa, kuwo cusub iyo kuwo horeba, ee waxaa kale oo ifbaxaya khilaaf la xiriira la safasho RW Kheyre la saftay siyaasadda Imaaraadka Carabta, kana saftay siyaasadda Madaxweyne Farmaajo ee dhexdhexaadnimada khilaafka Khaliijka.
Wararkan oo isa soo taraya kala soco Radio Daljir.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 490 Wararka 23950